ကလေးမြို့ က အရပ်ဝတ် ရဲတပ်ဖွဲ့လေးဦး ဆန္ဒပြသူတွေက ဖမ်းဆီး(မတ်၊၃၁၊၂၀၂၁)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်သူတွေက အာဏာပိုင်တွေဖက်က အင်အားသုံးဖြိုခွင်းတာတွေ ပစ်ခတ်တာတွေရှိပေမယ့်လည်း အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှူတွေ ဒီကနေ့အထိ နိုင်ငံအနှံ့ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးမြို့ဆန္ဒပြပွဲမှာတော့ အရပ်ဝတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်လေးဦးကို ဆန္ဒပြသူတွေက ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ ရန်ကုန်က ရရှိတဲ့သတင်းကို အလိမ္မာ တင်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားသူတွေကို အာဏာပိုင်တွေဖက်က အင်အား သုံးဖြိုခွင်းတာတွေ ပစ်ခတ်တာတွေရှိပေမယ့်လည်း အာဏာရှင်ဆန့် ကျင်လှုပ် ရှားမှူတွေ ဒီကနေ့အထိ နိုင်ငံအနှံ့ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်းမြို့နယ်မှာတော့ ဒီကနေ့ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားသူတွေကို ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းတာတွေ မရှိပေမယ့် မြို့ပတ်လမ်းမှာ မိုင်းပေါက်ကွဲတာကြောင့် ဒေသခံတွေ စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ မိုးညှင်းမြို့ခံ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
“ မြို့ပတ်လမ်းတံတားမှာတော့ မိုင်းပေါက်ကွဲတာရှိတယ် ခုလေးတင် မိုင်းပေါက်ကွဲသွားတာ။ မြို့ပြင်ထွက်လိုက်တာနဲ့ ရောက်ပြီး တက္ကသိုလ်ကျောင်းရဲ့ နောက်ကြောမှာပဲပေါ့။ မိုင်းပေါက် ကွဲတာကို ကြားကြားချင်းတော့ လာဖြစ်တာလည်းပေါ့နော်။ ပစ်ကြခတ်ကြပြီ လားပေါ့။ မြို့ထဲမှာ ဖြစ်မှာကို စိုးတာပေါ့။ အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်မှာတွေ မြို့ထဲက လူနေအိမ်တွေ ထိခိုက်မှာကို စိုးတယ်။ အခုအိမ်တော်တော်များများလည်း ဗုံးကျင်းတွေတော့ တူးနေကြတယ်။ ပုန်းခိုဖို့အတွက်ပေါ့နော်။ ”
ဒါအပြင် စစ်ကိုင်းဒေသကြီး ကလေးမြို့အတွင်း အရပ်ဝတ်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် လေးဦးကို ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးထားတာကြောင့် ရပ်ကွက်အတွင်း အာဏာပိုင်တွေက ပစ်ခတ်နေတာတွေလည်း ရှိတယ်လို့ ကလေးမြို့ခံ တစ်ဦးကပြောပါတယ်။
“ ကျနော်တို့ သပိတ်စခန်းကို သူတို့က တစ်ခြားလမ်းကနေ ဝင်လာတာခင်မျာ။ အဲတာ ကျနော်တို့ ကင်းသမားတွေနဲ့ တွေ့လို့ ဖမ်းထားတာပါ။နေ့လည် တစ်နာရီခွဲလောက်က ဖမ်းထားတာပါ။ ရပ်ကွက်ထဲတွေမှာတော့ သူတို့ သေနတ်တွေနဲ့ လိုက်ပစ်နေတာတွေတော့ ရှိပါတယ်ခင်မျာ။ ဆန္ဒပြတာကို မဟုတ်ပဲ ဒီအတိုင်း အလွတ်လိုက်ပစ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်မျာ။ ဒီနေ့က ဆန္ဒပြအင်အား တော်တော်များလာတယ်ခင်မျာ။”
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတွေက အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်သူတွေကို အာဏာပိုင်တွေဖက်က ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့တာကြောင့် သေဆုံးဒဏ်ရာရတာတွေ ရှိခဲ့တဲ့ မုံရွာမြို့နယ်မှာဆိုရင်လည်း ဒီကနေ့အထိ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်သူတွေ များပြားနေဆဲဖြစ်ပြီး အနိုင်ရတဲ့အထိ ဆန့်ကျင်သွားမယ်လို့လည်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာမှာ ပါဝင်နေသူ တစ်ဦးကပြောပါတယ်။
“ အနိုင်ရတဲ့ အထိလုပ်သွားမှာပါ။ ဘာကြောင့် လုပ်နေလည်းဆိုတော့ ကျနော်တို့က အာဏာရှင် စနစ်အောက်မှာ သေမထူးနေမထူး ဘဝတွေဆိုတော့ ကျနော်တို့မှာလည်း အနာဂတ်တွေ အများကြီးရှိတော့ အနာဂတ်တွေအတွက် အရပ်ဖက်အစိုးရနဲ့ အဆင်ပြေတော့ ပြည်သူကို ကြည့်တဲ့ အစိုးရနဲ့ပဲ အဆင်ပြေတော့ အဲဒါကိုရတဲ့အထိ ရအောင်လုပ်မှာပါ။ ”
ဒါအပြင့် ကယားပြည်နယ် ဒီမောဆိုးမြို့နယ် အတွင်းမှာလည်း ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်တာတွေ နေ့တိုင်းရှိနေတယ်လို့ ဒေသခံတစ်ဦးကပြောပါတယ်။
" ဆန္ဒပြတာတွေတော့ ရှိတယ် မြို့နယ်အလိုက် ဆန္ဒပြတယ်။ အင်အားကောင်း လာလားဆို တော့ အရမ်းအများကြီးလည်း မဟုတ်ဘူး အနည်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး။ ပုံမှန်ပဲပေါ့။ ဒီမောဆိုးဖက်မှာဆိုရင် ငါးမိုင် ခြောက်မိုင် ဖက်မှာတော့ အစပိုင်းက အင်အားသုံးဖြိုခွင်းတာတွေ ဘာတွေရှိတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ အင်အားသုံးဖြိုခွင်းတာတွေမရှိတော့ဘူး။ မနက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ သပိတ်ကလုပ်တဲ့အတိုင်း ဆန္ဒပြတာတွေရှိတယ်။ နေ့လည်ပိုင်းဆိုရင်လည်း ဆန္ဒပြကြတာရှိတယ်။ ညနေကကျတော့သူတို့ အများအားဖြင့် ဆိုင်ကယ်သပိတ်လေးတွေရှိတယ်။ ဖယောင်းတိုင်းလေးနဲ့ ဆုတောင်းသပိတ်လေးတွေ ရှိတယ်. ကိုယ့်ရပ်ကွက်နဲ့ ကိုယ်ပေါ့နော်။"
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်သူတွေကို အာဏာပိုင်တွေဖက်က ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် သေဆုံးသူ ၂၀၀ကျော်အထိရှိနေသလို ဖမ်းဆီးခံရသူတွေလည်း ထောင်နဲ့ ချီရှိနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီကနေ့အထိ နိုင်ငံအနှံ့မှာ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှား မှူတွေလည်း အင်အားကောင်းနေဆဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
မွနျမာနိုငျငံမှာ စဈတပျက အာဏာသိမျးပွီးနောကျပိုငျး အာဏာရှငျဆနျ့ကငျြသူတှကေ အာဏာပိုငျတှဖေကျက အငျအားသုံးဖွိုခှငျးတာတှေ ပဈခတျတာတှရှေိပမေယျ့လညျး အာဏာရှငျဆနျ့ကငျြလှုပျရှားမှူတှေ ဒီကနအေ့ထိ နိုငျငံအနှံ့ရှိနဆေဲဖွဈပါတယျ။ ကလေးမွို့ဆန်ဒပွပှဲမှာတော့ အရပျဝတျရဲတပျဖှဲ့ဝငျလေးဦးကို ဆန်ဒပွသူတှကေ ဖမျးဆီးထားပါတယျ။ ရနျကုနျက ရရှိတဲ့သတငျးကို အလိမ်မာ တငျပွထားပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံအနှံ့ အာဏာရှငျဆနျ့ကငျြလှုပျရှားသူတှကေို အာဏာပိုငျတှဖေကျက အငျအား သုံးဖွိုခှငျးတာတှေ ပဈခတျတာတှရှေိပမေယျ့လညျး အာဏာရှငျဆနျ့ ကငျြလှုပျ ရှားမှူတှေ ဒီကနအေ့ထိ နိုငျငံအနှံ့ရှိနဆေဲဖွဈပါတယျ။
ကခငျြပွညျနယျ မိုးညှငျးမွို့နယျမှာတော့ ဒီကနေ့ အာဏာရှငျဆနျ့ကငျြလှုပျရှားသူတှကေို ပဈခတျဖွိုခှငျးတာတှေ မရှိပမေယျ့ မွို့ပတျလမျးမှာ မိုငျးပေါကျကှဲတာကွောငျ့ ဒသေခံတှေ စိုးရိမျနကွေတယျလို့ မိုးညှငျးမွို့ခံ တဈဦးက ပွောပါတယျ။
“ မွို့ပတျလမျးတံတားမှာတော့ မိုငျးပေါကျကှဲတာရှိတယျ ခုလေးတငျ မိုငျးပေါကျကှဲသှားတာ။ မွို့ပွငျထှကျလိုကျတာနဲ့ ရောကျပွီး တက်ကသိုလျကြောငျးရဲ့ နောကျကွောမှာပဲပေါ့။ မိုငျးပေါကျ ကှဲတာကို ကွားကွားခငျြးတော့ လာဖွဈတာလညျးပေါ့နျော။ ပဈကွခတျကွပွီ လားပေါ့။ မွို့ထဲမှာ ဖွဈမှာကို စိုးတာပေါ့။ အသကျအန်တရာယျထိခိုကျမှာတှေ မွို့ထဲက လူနအေိမျတှေ ထိခိုကျမှာကို စိုးတယျ။ အခုအိမျတျောတျောမြားမြားလညျး ဗုံးကငျြးတှတေော့ တူးနကွေတယျ။ ပုနျးခိုဖို့အတှကျပေါ့နျော။ ”
ဒါအပွငျ စဈကိုငျးဒသေကွီး ကလေးမွို့အတှငျး အရပျဝတျနဲ့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျ လေးဦးကို ပွညျသူတှဖေမျးဆီးထားတာကွောငျ့ ရပျကှကျအတှငျး အာဏာပိုငျတှကေ ပဈခတျနတောတှလေညျး ရှိတယျလို့ ကလေးမွို့ခံ တဈဦးကပွောပါတယျ။
“ ကနြျောတို့ သပိတျစခနျးကို သူတို့က တဈခွားလမျးကနေ ဝငျလာတာခငျမြာ။ အဲတာ ကနြျောတို့ ကငျးသမားတှနေဲ့ တှလေို့ ဖမျးထားတာပါ။နလေ့ညျ တဈနာရီခှဲလောကျက ဖမျးထားတာပါ။ ရပျကှကျထဲတှမှောတော့ သူတို့ သနေတျတှနေဲ့ လိုကျပဈနတောတှတေော့ ရှိပါတယျခငျမြာ။ ဆန်ဒပွတာကို မဟုတျပဲ ဒီအတိုငျး အလှတျလိုကျပဈနတော ဖွဈပါတယျခငျမြာ။ ဒီနကေ့ ဆန်ဒပွအငျအား တျောတျောမြားလာတယျခငျမြာ။”
ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးတှကေ အာဏာရှငျဆနျ့ကငျြသူတှကေို အာဏာပိုငျတှဖေကျက ပဈခတျဖွိုခှငျးခဲ့တာကွောငျ့ သဆေုံးဒဏျရာရတာတှေ ရှိခဲ့တဲ့ မုံရှာမွို့နယျမှာဆိုရငျလညျး ဒီကနအေ့ထိ အာဏာရှငျဆနျ့ကငျြသူတှေ မြားပွားနဆေဲဖွဈပွီး အနိုငျရတဲ့အထိ ဆနျ့ကငျြသှားမယျလို့လညျး ဆန်ဒထုတျဖျောရာမှာ ပါဝငျနသေူ တဈဦးကပွောပါတယျ။
“ အနိုငျရတဲ့ အထိလုပျသှားမှာပါ။ ဘာကွောငျ့ လုပျနလေညျးဆိုတော့ ကနြျောတို့က အာဏာရှငျ စနဈအောကျမှာ သမေထူးနမေထူး ဘဝတှဆေိုတော့ ကနြျောတို့မှာလညျး အနာဂတျတှေ အမြားကွီးရှိတော့ အနာဂတျတှအေတှကျ အရပျဖကျအစိုးရနဲ့ အဆငျပွတေော့ ပွညျသူကို ကွညျ့တဲ့ အစိုးရနဲ့ပဲ အဆငျပွတေော့ အဲဒါကိုရတဲ့အထိ ရအောငျလုပျမှာပါ။ ”
ဒါအပွငျ့ ကယားပွညျနယျ ဒီမောဆိုးမွို့နယျ အတှငျးမှာလညျး ပုံစံအမြိုးမြိုးနဲ့ အာဏာရှငျ ဆနျ့ကငျြတာတှေ နတေို့ငျးရှိနတေယျလို့ ဒသေခံတဈဦးကပွောပါတယျ။
" ဆန်ဒပွတာတှတေော့ ရှိတယျ မွို့နယျအလိုကျ ဆန်ဒပွတယျ။ အငျအားကောငျး လာလားဆို တော့ အရမျးအမြားကွီးလညျး မဟုတျဘူး အနညျးကွီးလညျးမဟုတျဘူး။ ပုံမှနျပဲပေါ့။ ဒီမောဆိုးဖကျမှာဆိုရငျ ငါးမိုငျ ခွောကျမိုငျ ဖကျမှာတော့ အစပိုငျးက အငျအားသုံးဖွိုခှငျးတာတှေ ဘာတှရှေိတယျ။ အခုနောကျပိုငျးတော့ အငျအားသုံးဖွိုခှငျးတာတှမေရှိတော့ဘူး။ မနကျပိုငျးဆိုရငျတော့ သပိတျကလုပျတဲ့အတိုငျး ဆန်ဒပွတာတှရှေိတယျ။ နလေ့ညျပိုငျးဆိုရငျလညျး ဆန်ဒပွကွတာရှိတယျ။ ညနကေကတြော့သူတို့ အမြားအားဖွငျ့ ဆိုငျကယျသပိတျလေးတှရှေိတယျ။ ဖယောငျးတိုငျးလေးနဲ့ ဆုတောငျးသပိတျလေးတှေ ရှိတယျ. ကိုယျ့ရပျကှကျနဲ့ ကိုယျပေါ့နျော။"
မွနျမာနိုငျငံမှာ အာဏာရှငျဆနျ့ကငျြသူတှကေို အာဏာပိုငျတှဖေကျက ပဈခတျခဲ့တာကွောငျ့ သဆေုံးသူ ၂၀၀ကြျောအထိရှိနသေလို ဖမျးဆီးခံရသူတှလေညျး ထောငျနဲ့ ခြီရှိနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ဒီကနအေ့ထိ နိုငျငံအနှံ့မှာ အာဏာရှငျဆနျ့ကငျြလှုပျရှား မှူတှလေညျး အငျအားကောငျးနဆေဲ့ဖွဈပါတယျ။